Last updated on juin 21, 2019
Tanterahina androany ny hetsika « Tamboho » ataon’ny Tily eto Madagasikara eny amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely. Hetsika izay entina hanomanana ny faha 100 taona sy ny fananganana ny tranombakoka ho an’ny Tily eto Madagasikara afaka 5 taona.
Hetsika « Tamboho »
Tsy ho ela dia hankalaza ny faha 100 taonany ny Fikambanana Tily eto Madagasikara izay niorina tamin’ny 1924. Mikarakara ny hetsika « Tamboho » na ny tahala mampiray ny beazina sy ny olon-dehibe ho amin’ny ho avin’ny ny fikambanana ny Tily eto Madagasikara androany faha 22 Jona eny amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely.
Nisy ny fihaonana niarahan’ny Tily Eto Madagasikara tamin’ny mpanao gazety ho fampahafantarana ny hetsika. cc: Toria Dimbiniaina
Hampita FANILO ireo zoky ary hitahiry ny soa toavina maha skoto kosa ny zanaka sy ny zandry aty aoriana.Hampivondrona ireo efa nisahana andraikitra nasionaly teo anivon’ny fikambanana Tily eto Madagasikara ka mbola velon’aina sy ireo solontenan’ny rafitra amin’izao fotoana izao ity hetsika ity. Hararaotina ihany koa io fotoana io hanangonana ireo vakoka sy tantaran’ny fikambanana.
Fikambanana Tily Eto Madagasikara
Ny fikambanana Tily eto Madagasikara dia mpikambana eo anivon’ny fikambanan’ny Skoto maneran-tany na ny Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS). Fikambanana mitaiza tanora hijoro ho vavolombelon’I Kristy, ho andrin’ny fianakaviana ary hitory ny firalahiana eo amin’ny manodidina azy. Fikambanana mivohy ny fandraisana andraikitra eo anivon’ny fiarahamonina sy ny fiangonana.